Ukunikezelwa Kwesebe LamaNgqina KaYehova LaseMadagascar NelaseIndonesia
“IMINCILI endinayo ingaphaya,” watsho njalo omnye udade xa kwakunikezelwa isebe laseMadagascar ngoMgqibelo, ngoJanuwari 24, 2015. Yena kunye nezinye iindwendwe eziyi-583 babevuyiswa kukubona amagumbi okuhlala ayi-19, igumbi lokutyela elandisiweyo kunye nekhitshi elilungisiweyo. Kwandiswa nesebe Lenkonzo, eLezemali neLasekuhlaleni Lokwakha Nelenza Iiplani. Ngaphezu koko, isebe Lezinto Ezirekhodiweyo Neevidiyo neleNtetho Yezandla, omabini afumana izitudiyo ezintsha kwaza kwasekwa neSebe Elenza Iincwadi ZeBraille. Emva kokuba zive amagqabantshintshi ngembali engomsebenzi wokushumayela eMadagascar, iindwendwe zamamela intetho emnandi kaMark Sanderson weQumrhu Elilawulayo.
Amagumbi okuhlala amatsha ayi-19 kwisebe laseMadagascar
Kwatsho kwathi xibilili kubantu bakaYehova eJakarta, eIndonesia, xa amanzi awayebangelwe zizikhukula awutha kusengethuba ngaphambi kokuba kunikezelwe isebe elitsha ngoFebruwari 14, 2015. Eli sebe likumgangatho omnye kwisakhiwo esinemigangatho eyi-42, nakwimingangatho eyi-12 kwisakhiwo esikufutshane. Amanye amasebe aliqela aseBheteli akwizakhiwo ezincinci ezikufutshane. Intetho yokunikezelwa kweli sebe yanikelwa nguAnthony Morris weQumrhu Elilawulayo. Ngosuku olulandelayo abantu abayi-15 257 bahlanganisana kwibala lemidlalo bemamele intetho enomxholo othi, “Qhubekani Niwenza Ngonyamezelo Umsebenzi Olungileyo.” Olu cwangciso lwalubukelwe nangabanye abayi-11 189 ababekwiindawo eziyi-41. Le yeyona ndibano yayinabantu bakaYehova abaninzi eIndonesia. URonald Jacka, omnye wabathunywa bevangeli bokuqala eIndonesia, wathi: “Xa ndandifika ngo-1951, kwakukho abavakalisi abayi-26 kuphela kulo lonke eli lizwe. Kodwa namhlanje, bebengaphezu kwe-26 000 abeze kolu cwangciso lukhethekileyo. UYehova ubasikelele ngokwenene abantu bakhe eIndonesia!”
Iiofisi Nokukhenketha EBheteli: EMadagascar
Iofisi Nokukhenketha EBheteli: EIndonesia